Oromoon karaa filannoo nagaan angoo qabate habashota waliin jirachuu ni danda’aa? Kutaa 1ffaa | freedomfororomo
Garaa qaama barrefamakotti gaafan seenu,akkuma beekamu Ummatni Oromoo akkuma saboota addunyaa kana irratti argamanitti, ummata seenaa of danda’ee, biyya sarara daangaa beekamaa qabu, aadaa, afaan, duudha fi qora-qalbi sabbummaa kan barootaa kumaatamaan lakkaawwaman kuufachaa dhufe kan qabuu fi seenaa bulchiinsa fi aadaa siyaasaa adunyaa kanaaf bu’ura dimokiraasi kan ta’ee, sirna gadaa kan qabu akka turee seenaan jiruu ragaa ni ba’a. Haa ta’u malee garuu ummatnii Oromoo akka nagaan hin jiraanne bara minilik humnaan biyya isaa weraree lafaafi qabenyaa isaa irra fudhatee enyuummaa Oromoo kan Amaraatti akka jijjiramu taasisee kasee senaan, afaani fi Aadaan Oromoo yeroo yerootti babadaafi cunqurfaamaa kan dhufee yoo ta’uu Ammalee jijjiirama bifaa fi maqaa yoo ta’ee malee ittuma fufee jira, Barota dheraa darban kessa eegdoota sirna kiyoo gabroonfatoota Amaaraara (warren saba Oromoo human Amaaromsan), waggota 22 as ammo egdota sirna kiyoo Itoophiyaa kan ta’an hogganoota Wayyaaneetiin warranni Oromoo balessuu ittuma jira. Fuldurattii kun Oromoo irraa ni dhaba hin dhabbatuu waluumaan ilaalla. Waanin kaasuu barbaadu garuu akka kiyyattii, gitni bittaa garee lamaan kun bifa isaanituu adda adda malee isaan Oromoof tokkuma, sabaabni isaas sirni kiyyoo gabrummaan ummata Oromoo fi Oromiyaa irratti dirriirfame kuni dantaa gita bittuu Habashotaa kan walii gala kan eeguu fi tiksuu malee dantaa Oromoo kan eguu fi tiksu miti. Sirni gittota bittaa Habashaa lammeenu sirna aadaafi Afaan Oromoo jibbuu garuu sirnaa qabeenya ummata Oromoo jaallatu fi saamuu dhan jiraachuf barbaadu dha. Waldhabiin gittota lammanii kun Oromiyaa irratti ool aantumaa gartumaa siyaasaa qabaachuuf irraan kan ka’ee altokko tokko wal moormu, yeroo Oromoon jabbaate tokko ta’ee ka’uu garuu lammen isaanu oromorratti ka’uuf tokkumma umuu. Kanaaf ammo raga kan ta’uu seenaa walhubannoo fi waliigalteen Miniliki fi Yohaannis kan Dirree Boruu ni himaa.
Warren Habashaa egaa har’as boris kan isaan irratti yeroo hunda walii galan kessa; sab-boonnumaan oromo akka hin dagagnee gochuu innis: aadaa, seenaa, afaan duudhaa fi waan Oromoo saboota biro irraa adda isa godhuu akka lafa hin qabannee gochuu, fedhii isaa fi qabeenya biyya isaa irrattii mataa isaan ajajaa akka hin taane, sabni Oromoo bilisa ta’ee waan kiyya kan jedhu hunda akka mataa isaatiin ajaju hin dandenye godhu dha. Kanaaf Warreen habashaa kalessas, har’as, gara fuldurattis ummata Oromoo fi enyumaa saba Oromoo adunyaa kana irraa dhabamsisuudhaan maalummaa isaa fi seenaa isaa Irranfatee habashaa fakkaatee, ofitti qaana’ee, enyumma isaa dhisee isaan akka habashummaa akka enyummasaa jedhee himatu barbaadu. Kaayyoon isaanii hojii abbootiin isaanii jalqaban dhuggoomsuu fi fiixa baasuuf, sabni Oromoo akka Itoophiyuummaa fi enyummaa Itoophiya akka mallattoo isaatti fudhatee faalla seenaa isaa dhaabatu godhanii tursiisudhaaf akka ta’ee jala murre kan hundi kenyaa hubanne dha. Rakkoon ummatni Oromoo eega kiyyoo garbrummaa warra Habashaa jalatti kufe kaasee irra ga’ee; ajjechaa, biyya isaa gadhisee baqaa deemuun bakka baqaatti du’uu,senaan Oromoo inni dhugaan senaa sobaa kan isanitiin dibamuu fi laaqamuu, qabenyaan saamamauu, beela, gadadoo, tuffatamu, akka gad antummaatti ilalamuu, dhiphinaa, salphinaa fi dhumiinsaa dha. Hangaa yonaa garuu Oromoon rakko kana jalaa ba’uuf hin dandeenye sababiin isaas haallii siyaasa Oromoos ta’ee kan Impaayera Itophiyaa hedduun walxaxaa fi kaan umrii wayyaanee dheressuf mija’aa ta’ee argamaa jiraachu dha. Walxaxaa kan isa taasisaa jiruu keesaa tokko dhabotni siyaasaa Oromoo gara garaaraa yeroo yerootti bakka adda addaatti dhaabbachuun walii isaanii fi ofii isaanii giddutti akkasumas warren Habashotaa tayitaarra jiranis ta’ee taytaarra ba’uuf deeman giddutti falammii deemsisaa jiran irraan kan ka’e dha. Humni TPLF jarmiyootni siyaasa Oromoofi warren biro isa morman waldura dhaabbannoo isaan walii isaanii giduutti geggeesaniif haala mijaawaa uumaafi jirachuu hubateraa. Toftaan kunis Oromoon akka cimee isa dura hindhaabaneef aanjaa uumaafi jirachuu hubataniruu. Haga humnooti Oromoo siyaasaa wayyanee kana morman kun humna isaanii wal-irratti fixanitti wayyaneen umrii bullchiinsa sukkanessaa isaa taakkuu tokko fi lama achi butata jira. Wayyanootni ofii isaanii rakkoo waal gidduttii ha qabaatanillee malee rakkoo isaanii dabarsaanii qamaa biraattii hin kennaanii kun ammo toftaa fuula duratti isaan ademsisuuf ykn butuuf isaan qopheessa, haalas ni mijessafi. Warrii Amaaraas akkasuma qaawwaa argameen Oromoon akka waldiguu fi qabsoon sirnaa abbotii isaanii deebisuuf gaggessaa jiraan akka cimu hala mijataa ummachaa waan jiran fakkaata.
Ani akka shammarree Oromoo tokkootti yeroon yaaduu, jaarmiyotni amma biyya Itophia keessatti warren Habashaa waliin taanee sirna warraaqsa dimokrasi dhuga dhabnee Oromoo angessinee Habashoota waliin taanee jiranna jedhani maqaa adda adda dhan of moggaasani qabsoo bilisumma Oromo irra achii ba’anii of gurmessun bu’aa isaan gara fuldurattii fidan jira jedhee waan natti mul’atu hin jiru. Daranuu sammuu dargaggotaa fi qabsa’ota Oromoo ballessuufi tokkumma ilmaan Oromoo diigu, lafeefi dhigaa qabsa’oota Oromoo bilisummaa Oromoof jechaa caccabee fi dhangala’ee akkanumaan dirree irratti hambisuu male faydaa ka bira Oromoof ni qabataa jedhees hin yaadu. Biyyi Impayera Itophia jedhamtu kellessas har’as boris Oromoof mana hidha, mana saamichaa fi mana enyummaa Oromoo balleessu malee mana Oromoo ijaaru miti. Kun waanuma duris ta’ee ammas umrii keenya kana keessattii hubachaa dhufne dha. Hara’as jalqabarratti dhihenyuma kana kessattii waan bay’ee arga waan jirru dha.
*Yadaa yoo qabaattan kanaan na ergaa, miliyontaddesse@gmail.com
16 comments on “Oromoon karaa filannoo nagaan angoo qabate habashota waliin jirachuu ni danda’aa? Kutaa 1ffaa”
zenab muhamad on February 5, 2014 at 9:44 pm said:
tokumman biyaa alati umamuu biyaa kessati hin umamne. kunisi sababin isa humni motuma wayanee malaqan gutame umata kessa wan faca’ef.ni jiru namon hedun kan ani nama ifin jedhu. garamaa gudfate kotima ofate sabaf hin yaduu dinaf harka. hawasa qate bulaa kessa deme aka dubane godha ani beku falaa oromo??????
me adunyan hindi nama akanatin mal jetu nama dina nyane kan saba ofi nyatu.
yaa rabbii attii nu birmsdhuu
Waayyee Abuno on February 6, 2014 at 12:56 am said:
Kanane garaan isani gutamnan firaa isatu hin fedhuu saba mal gafata obbolesa wajjiin dhaalate kan barate universiitidha ebbiifameef hojii bana seensiisuu hin danda’uu kanatu sabaf yaada garaa isatu Oromoo irraa same guuta maalamaltummaan
Waayyee Abuno on February 6, 2014 at 1:15 am said:
Bilisummaan Oromoo Kan Mirkanaau Karaa Qabso Wabo Qofaadha kunis sababa ummaani oromoo Abbaa Biyyaa Taaef jechaa waayaneen tan tolattii biiyyaa teenya nuf gad hin lakkiiftu kanaaf maal goochuu qabnaa? mee wal marii’adhaa bakkaa jirtaniit namu
qeerroo oromiyaa on July 31, 2015 at 6:47 am said:
obbolessaa koo dubbiin kee dhugaadha
Anonymous on March 14, 2014 at 6:24 pm said:
Anonymous on March 10, 2015 at 9:52 am said:
Garbummaa qofa miti kan addunyaa kana irra jiru Bilisummaanis ni dhufti yaa Oromoo!
ShiferawTolcha on March 26, 2015 at 7:51 am said:
Argaas turre,arggaas jirra! Walumaa galatti qabsoon filannoo arma dura geggeeffames moo’achuuf osoo hin taane uummata barsiisuf ta’ullee yeroo ammaa uummanni hunda adda baafateera,kanaaf dhiigan qofa ta’uu wal haa hubachiifnu!
Anonymous on April 1, 2015 at 8:32 pm said:
Barri ni dhufas ni darbas Bilisummaan ummata OROMOO Yoomi laata!
Naol Firaol on July 17, 2015 at 7:51 pm said:
tamsasi umataoromoof dabarsite bayee garidha
Alamuu baatuu on December 5, 2015 at 3:35 pm said:
jabadhu qabasii dhigaa barata kenyaa nama nuf debisu dhabane garan nu gubbate seenan in dagatamu garaf miit kan jiranuu dhugaaf male!!!!
alamuu baatuu on December 5, 2015 at 3:43 pm said:
saba koo oromoo rakkoo jiru maa furumata dhabee?
Anonymous on January 4, 2016 at 4:05 pm said:
Qeero oromiya on January 4, 2016 at 4:10 pm said:
Uuuu !!! enyutan iyya
Alamu Waquma on February 2, 2016 at 4:18 pm said:
Enyu yuu nuf dhaga’u didera malo malo hundumtu gaara qulqulludhan waaqayyotti haa bonyu wanti hundu isa arka isa jira waan ta’ef otu dhuga qabnu dhuga kenya waan dhoksanif waaqayyo dhuga kenya nuf basa DHAMSIN ANI QABU maalo tokkumma dhabne maale qabenya dhabne miti bay’inas dhabne miti maalo tokkumma maalo maalo
Bilal Husein dhala oromoo on May 7, 2016 at 1:10 am said:
yaa dhiiga koo yaadni dhuguma waan nama gammachiisudha thankyou again thankyou!!
Anonymous on July 13, 2017 at 5:47 pm said: